နေ့: အောက်တိုဘာလ 1 2019
အစ္စတန်ဘူလ်İSPARKထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အရေးပေါ် Access ကိုလမ်းများ
IMM တစ်ပန်းခြံအဖြစ်ဤဧရိယာသုံးပြီးရှောင်ရှားရန် unregistered အရေးပေါ်ဝင်ရောက်ခွင့်လမ်းများနှင့်ယာဉ်ရပ်နားစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ ISPARK ။ ISPARK အတွက်အရေးပေါ်တာဝန်ရှိသူများချက်ချင်းတောက်ပန်ဆောင်မှုများပေးနေဖြင့်ဤဒေသများရွှေ့ပြောင်း; အမြန်လိုသော [ပို ... ]
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ် 10 နေ့အခမ်းအနား re-ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဇွန်လတွင်Karabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (KARDEMİR), အမှတ်4112 ရပ်စဲပေါက်ကွဲမှုမီးဖို, ကျင်းပခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအပြည့်အဝအသင်းအဖြစ်စကားဝိုင်းကိုအခမ်းအနားသို့တက်ရောက် [ပို ... ]
Unye ဆိပ်ကမ်းကုန်သွယ်ရေး Volume ကိုတိုးမြှင့်
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Ünyeဆိပ်ကမ်းအတွက်ကုန်သွယ်မှုနှောင့်အယှက်မရှိဘဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ဆိပ်ကမ်းဆီနှင့်ရေကာတံတိုင်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်နေ၏တန်ဆာများကိုဆိုက်ကပ်နိုင်စွမ်းကိုခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ Unye ဆိပ်ကမ်းစီစဉ်နောက်ထပ်ဆိုက်ကပ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှမှ projected [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ရဲ့ Boulevard, traffic ကိုအမြန်နှုန်းနှင့်လမ်းများတွင်လမ်းများနှင့်ရင်ပြင်အလုပ် marking မလြော့နေဆဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်နံနက်ယံ၌သိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့များ, မျဉ်းအလုပ်များအသွားအလာနှင့်လမ်းအသွားအလာမဟုတ်ပါဘူးသက်တမ်းတိုးမည်။ လုံခြုံမှုတဲ့ Metropolitan မောင်းနှင် [ပို ... ]
ဂါလာတာ, PSG အသင်းများအတွက် Metro ပွဲစဉ်အချိန်ဇယားများတိုးချဲ့!
ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းနှင့်ဂါလာတာ 22 အကြားနာရီပေါင်း: 00 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်များ 01 များအတွက်အချိန်အတွက်အပေါငျးတို့သမြေအောက်ရထားလိုင်းများအတွက်ကစားပါလိမ့်မည်: 30 သည်အထိတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ အောက်ပါလမ်းမှာရှိတဲ့အစ္စတန်ဘူလ်က Metro ဖွငျ့ကြေညာချက်; "ချစ်လှစွာသောခရီးသည်; အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 1 2019 22 နာရီ: အ 00 ခုနှစ်တွင် [ပို ... ]
အဆိုပါ 15 ဘူတာရုံနှင့်ဘူတာရုံကန့်သတ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အထူးအခွအေနနှင့်အတူခရီးသည်အဘို့အလိမ္မော်ရောင်စားပွဲဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခံရဖို့အကူအညီ mobility YHT အစုံရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ YHT ၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်သတ်မှတ်၏ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သောတရားဝင်ပြန်တမ်းအတွက်ကြေငြာချက်အရ [ပို ... ]
မီးမှာနာတာရှည်ဆေးရုံ-Perper metrobus ရပ်နားအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲကဖဲ့။ Metrobus အချိန်မီးကြောင့်နှောင့်နှေးရှိခဲ့သည်။ မီးအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ Metrobus IETT ။ အဆိုပါကြေညာချက်ကဆိုသည်; "IETT Metrobus စင်းကိုကျနော်တို့ရဲ့အသက်အကြောင်း 525 12 tool ကိုရှာတွေ့ထားပါတယ် [ပို ... ]
အမှိုက်သရိုက် Truck ကားKütahya3အတွက်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းဒဏ်ရာရခဲ့သည်ကိုကူး။ တစ်ဦးအဆင့်ကိုကူးမတော်တဆမှုမှာအမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကား၏ခေါငျး၌ရိုက်ပုတ်ခံရပြီးနောက်Kütahya3ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရပန်းကန် Perla ရပ်ကွက်အတွင်း၏ညှနျကွားထဲမှာ 06 490 MDGs အဆင့်ကိုကူးနောက်ဆုံး u.c. [ပို ... ]
VelimeşeKapıkule Catenary Line ရှိရှိရင်းစွဲ ISs များမှလွတ်လပ်သောစာရင်းစစ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအစားထိုးမည်။ အလားတူမီးရထားသတင်းနှင့်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအခြားသတင်းများRayHaber 25.01.2019 တင်ဒါသတင်းလွှာ 25 / 01 / 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင် 25.01.2019 အတွက်တင်ဒါမှတ်တမ်းမရှိပါ။RayHaber [ပို ... ]
ရထား Burgundy ၏စိတ်နှလုံးကူးရှိရာအိန္ဒိယအတွက်ဆင်၏ဗီဒီယိုကို။ လမ်းလျှောက်ပိုက်ကွန်အိန္ဒိယတွင်အရှိန်သံလမ်းအပေါ်တစ်ဦးရထားဝင်တိုက်ခဲ့သည်။ အလေးအနက်ထားမှုကြောင့်ဆင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တောအုပ်သို့သွားလေ၏သက်ရောက်မှုမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရ။ အဆိုပါမတော်တဆမှုမြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားရဲ့ Jalpaiguri ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနောက် [ပို ... ]
ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (BTS) Diyarbakırဌာနခွဲကသမ္မတ Nusret Basmacı, Batman-Diyarbakir တရားမဝင်အတွက်ရထားများအကြားအဆင့်ကိုဖြတ်၏တစ်ဦးချင်းစီလ 4-5 ရထားမတော်တဆမှုကအစပြုညွှန်း, အာဏာပိုင်တွေကအစီအမံရှေ့တော်၌တခဏယူသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ မီးရထား [ပို ... ]
ဘလွန်းဘာ့ဂ်သတင်းအေဂျင်စီ၏အဆိုအရအဆိုပါအစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လေဆိပ်ရဲ့မိတ်ဖက်များကရပ်တန့်ကြောင်းဆိုပါတယ်ကဆိုသည်။ တစ်ဦးက Bloomberg သတင်းအရသိရသည်လေဆိပ်ရဲ့တတိယလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့ကိုလေဆိပ်မှာတန်ဖိုး, 11 ဒေါ်လာဘီလျံအတွက်၎င်းတို့၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းချရန်ပြင်ဆင်နေခဲ့သည်။ ရောင်းမည်အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် [ပို ... ]
အဆိုပါတူရကီ-Sivas YHT စီမံကိန်းကိုမှာ lKm လေ့လာမှုများအကြား Silk Road လမ်းကြောင်းလျှော့ချဖို့နာရီ2405 အကြားတူရကီ-Sivas အပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူဆက်လက်။ အဆိုပါတူရကီ-Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းရထားလမ်းနောက်ထပ်လေ့လာမှုများတွင်ပါရှိသော 100 ရက်ကြာအရေးယူမှုအစီအစဉ် [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်များစွာသောအထင်ကရအဆောက်အမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမြို့နှင့်အတူညှိနှိုင်းအတွက်သမ္မတ၏ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုရုံးနိုင်ငံသားများ '' နေအိမ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ Inc ကိုulaşımpark , 82 183 တထောင်ခရီးသည်တစ်ဦးနေ့, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဘတ်စ်ကားနှင့်အတူမှတ်တမ်းအားဖြင့်ရွှေ့ [ပို ... ]